Ruzivo rwekuchengetedza dhata, mashandisiro ekuki uye disclaimer - www.amp-cloud.de
Dziviriro yedata, makuki & chisungo
Chinja dziviriro yedata.
Shandisa rinotevera bhatani kuvhura chinyorwa chinyorwa pane kushandiswa kwemakuki, ayo aunogona kushandisa kushandura inoenderana dziviriro yedata.
Chinja marongero ekushandisa kuki
Mhosva maererano nezviri mukati www.amp-cloud.de:
Zviri mukati mapeji e www.amp-cloud.de zvakagadzirwa nekuchenjerera kukuru. Hapana vimbiso inopihwa yekurongeka, kukwana uye kumusoro kwezviri mukati. Semupi webasa, basa rinoenderana ne § 7 Paragraph 1 TMG yezvako zviri pamapeji e www.amp-cloud.de inoshanda zvinoenderana nemitemo yese. Maererano ne §§ 8 kusvika ku10 TMG, zvisinei, hapana chisungo semupi webasa kuti atarise ruzivo rwakatapurirwa kana kuchengetwa rwechitatu kana kuongorora mamiriro ezvinhu anoratidza basa risiri pamutemo. Zvisungo zvekubvisa kana kuvharidzira kushandiswa kwemashoko maererano nemitemo yakawanda inoramba isingabatanidzwi. Nekudaro, mhosva yereferensi iyi inogoneka pakutanga kubva panguva yatinoziva nezvekutyorwa kwemutemo. Patinongoziva nezvekutyorwa kwemutemo kunoenderana, zvirimo zvinobviswa nekukasika.
Mhosva maererano nezve zvinongedzo pawww.amp-cloud.de:
Kupihwa kubva ku www.amp-cloud.de kunogona kunge kune zvinongedzo kune vekunze vechitatu-bato mawebhusaiti ane avo zvemukati anoshanda we www.amp-cloud.de haana simba. Naizvozvo hapana vimbiso inopihwa yezvinhu zvekunze izvi. Iye anopa saizi kana mushandisi wemapeji anogara aine chekuita nezviri mukati memapeji akabatanidzwa. Kana tikaziva kutyorwa kwepamutemo, zvinongedzo zvakadaro zvinobviswa nekukurumidza sezvazvinogona.
Izvo zvirimo uye mabasa akagadzirwa newebhu webhusaiti pamapeji ewww.amp-cloud.de anozviisa pasi pemutemo weGerman wemutemo. Iko kubereka, kugadzirisa, kugovera uye chero imwe mhando yekushandisa kunze kwemiganhu yemutemo wekodzero inoda mvumo yakanyorwa yemunyori, musiki kana mushandi. Chero chero kurodha pasi uye makopi ewebsite ino anotenderwa chete kushandiswa wega. Chero mhando yekushambadzira inoshandiswa inorambidzwa pasina mvumo yakajeka yemunyori akakodzera! Zvichienderana nezviri mukati memapeji ewww.amp-cloud.de haina kugadzirwa neinoshanda webhusaiti iye, kodzero dzekambani dzechitatu dzinoonekwa. Nechinangwa ichi, chechitatu bato zvemukati zvinoratidzwa zvakadaro. Kana kukanganisa kwekodzero kukabuda pachena, tinokukumbira kuti utizivise saizvozvo. Kana tikazoziva kutyorwa zviri pamutemo, zvemukati zvakadaro zvinobva zvabviswa nekukurumidza.
Dziviriro yedata nekutarisa:
Ruzivo runotevera runopa pfupiso yakapusa yezvinoitika kune rako dhata kana iwe uchishanyira webhusaiti yedu. Yega data data rese data iwe raunogona kuzivikanwa pachako. Ruzivo rwakadzama pamusoro penyaya yekuchengetedzwa kwedata kunogona kuwanikwa mune yedu dziviriro yekuzivisa pasi penyaya ino.
Kuunganidzwa kwedata pane webhusaiti yedu
Ndiani ane basa rekuunganidza dhata pane ino webhusaiti?
Kugadziriswa kwedatha pane ino webhusaiti kunoitwa neanoshanda webhusaiti. Iwe unogona kuwana yavo yekuonana ruzivo mune inonyorwa ino webhusaiti.
Isu tinounganidza sei data rako?
Kune rimwe divi, data rako rinounganidzwa kana iwe uchipa iro kwatiri. Izvi zvinogona kuve, semuenzaniso, data raunopinda mune fomu rekubatana.
Dzimwe dhata dzinozvinyorwa otomatiki needu masisitimu eIT paunoshanyira webhusaiti. Izvi zvinonyanya kuve data rehunyanzvi (semu internet browser, inoshanda sisitimu kana nguva yekuona peji). Iyi data inounganidzwa otomatiki nekukurumidza paunopinda webhusaiti yedu.
Chii chatinoshandisa data rako?
Une mvumo yekugamuchira ruzivo nezve mabviro, mugashiri uye chinangwa cheyako yakachengetwa data yemahara chero nguva. Iwe zvakare une kodzero yekukumbira iyo correction, ichivharira kana kubviswa kweiyi data. Iwe unogona kutibata nesu chero nguva kukero yakapihwa mune yepamutemo chiziviso kana uine chero mimwe mibvunzo nezve dziviriro yedata. Iwe zvakare une kodzero yekuisa chichemo kune anokwanisa manejimendi masimba.
Kuongorora maturusi uye echitatu bato maturusi
Paunoshanyira webhusaiti yedu, maitiro ako ekushambadzira anogona kuverengerwa. Izvi zvinonyanya kuitwa nemakuki uye anonzi mapurogiramu ekuongorora. Maitiro ako ekufambisa anowanzo kuongororwa zvisina kuzivikanwa; maitiro ekushambadzira haakwanise kuteedzerwa kwauri. Unogona kupokana neiyi ongororo kana kuidzivirira nekusashandisa zvimwe zvishandiso. Unogona kuwana ruzivo rwakadzama pane izvi mune inotevera dziviriro yedata yekuzivisa.
Unogona kupokana neiyi ongororo. Isu tinokuzivisa iwe nezve mikana yekupokana mune ino dziviriro yekuzivisa.
Ruzhinji ruzivo uye rwekumanikidza ruzivo:
Vashandisi ve ino webhusaiti vanotora zvakanyanya kuchengetedzwa kwedata rako pachako. Isu tinobata yako yemunhu data zvakavanzika uye zvinoenderana nemutemo mutemo dziviriro mirau uye uku kudzivirirwa kwedata.
Paunoshandisa iyi webhusaiti, dzakasiyana dzakasiyana data dzinotorwa. Yega data iri data iwe raunogona kuzivikanwa pachako. Ichi chirevo chekudzivirirwa kwedata chinotsanangura kuti ndeipi data yatinotora uye nezvatinoishandisa. Inotsanangurawo kuti izvi zvinoitwa sei uye nechinangwa chei.
Isu tinonongedza kuti kufambiswa kwedata pamusoro peInternet (semuenzaniso kana uchitaurirana nee-mail) kunogona kuve nemikana yekuchengetedza. Kudzivirirwa kwakakwana kwedata kunopindirwa nevechitatu mapato hazviite.
Tarira pane mutumbi une mutoro
Mutumbi une basa rekugadzirisa dhata pane ino webhusaiti ndewe:
Mutumbi une mutoro munhu wepanyama kana wepamutemo uyo, ari ega kana akabatana nevamwe, anosarudza nezvezvinangwa uye nzira dzekugadzirisa dhata rako wega (semuenzaniso mazita, email kero, nezvimwewo).
Kubviswa kwemvumo yako mukugadziriswa kwedata
Yakawanda yekugadzirisa dhata mashandiro inongogoneka nemvumo yako yakajeka. Unogona kubvisa mvumo yako chero nguva. E-mail isina kurongwa kwatiri yakakwana. Mhedzisiro yekugadziriswa kwedatha kunoitwa kusati kwadzoserwa kunoramba kusingabatwe nekudzoserwa.
Kodzero yekukwidza kune anotarisira maneja manejimendi
Kana paine kutyorwa kwemutemo wekuchengetedza dhata, munhu ane hanya ane mvumo yekuisa chichemo kune anokwanisa maneja manejimendi. Iwo anokwanisa manejimendi masimba e data ekudzivirira nyaya ndeye nyika dziviriro data officer weiyo federal mamiriro mune yedu kambani iri. Rondedzero yevakuru vekuchengetedza data uye yavo yekutaurirana inogona kuwanikwa pane inotevera chinongedzo: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Kodzero yekutakurika kwedata
Une mvumo yekuve nedata ratino rongedza otomatiki pahwaro hwekubvumirana kwako kana mukuzadzikisa chibvumirano chakapihwa kwauri kana kune wechitatu bato mune yakafanana, inoverengwa nemushini fomati. Kana iwe ukakumbira kuendesa chaiko kwedata kune mumwe munhu ane basa, izvi zvinongoitwa chete kana zvichinyatsoita.
Ruzivo, kuvharira, kubvisa
Mukati megadziriro yezvinoshanda zviri pamutemo, une mvumo yekusunungura ruzivo nezve data rako rakachengetwa, kwavakabva uye vanogamuchira uye chinangwa chekugadziriswa kwedata uye, kana zvichidikanwa, kodzero yekururamisa, kuvharira kana kudzima iyi data. Iwe unogona kutibata nesu chero nguva kukero yakapihwa mune yepamutemo chiziviso kana uine chero mimwe mibvunzo pamusoro penyaya yedunhu dhata.
Kuramba kushambadzira tsamba
Isu tinopokana nekushandiswa kweiyo data rekutaurirana rakaburitswa muchimiro chechisimbiso chisungo chekutumira zvisina kukumbirwa kushambadza uye ruzivo ruzivo. Iwo anoshanda emapeji anonyatso chengetedza kodzero yekutora matanho epamutemo kana vasina kukumbirwa kutumira ruzivo rwekushambadzira, senge spam e-mail.
Kuunganidza dhata pane webhusaiti yedu:
Mamwe mawebhusaiti anoshandisa anonzi macookie. Cookies haikuvadze komputa yako uye haina mavhairasi. Cookies inoshanda kuita kuti yedu yekupa iwedzere mushandisi-inoshamwaridzika, inoshanda uye yakachengeteka. Cookies zvidiki zvinyorwa zvemafaira zvakachengetwa pakombuta yako uye zvinochengetwa nebrowser yako.
Mazhinji amakuki isu atinoshandisa anonzi "musangano makuki". Izvo zvinodzimwa zvoga mushure mekushanya kwako Mamwe makuki anoramba akachengetwa pafoni yako kusvika waadzima. Aya makuki anotigonesa kuziva browser rako nguva inotevera yaunoshanyira.
Unogona kuseta bhurawuza rako kuti uzive nezvekugadzwa kwemakuki uye uchingobvumira makuki mune akasarudzika mamiriro, kusabvumidza kugamuchirwa kwemakuki kune mamwe makesi kana kazhinji, uye nekumisikidza otomatiki kubviswa kwemakuki paunovhara browser. Kana makuki akavharwa, mashandiro ewebhusaiti ino anogona kutadziswa.
Makuki anodikanwa kuita nzira yekutaurirana yemagetsi kana kupa mamwe mabasa aunoda (semuenzaniso, ngoro yekutengera) anochengetwa pahwaro hweArt. 6 Para. 1 lit. f GDPR yakachengetedzwa. Iyo webhusaiti inoshanda ine kufarira kwepamutemo mukuchengeta makuki ehunyanzvi asina kukanganisa uye akagadziridzwa kupihwa masevhisi ayo. Mukati semamwe makuki (semuenzaniso makuki ekuongorora maitiro ako ekufambisa) akachengetwa, aya anorapwa zvakasiyana mune ino dziviriro yedata.
"Rinoshanda" cookie chikamu
Makuki ari muchikamu che "Basa" anoshanda chete uye anodikanwa kuti webhusaiti iitwe kana kuitiswa mamwe mabasa. Izvi zvinoreva kuti vanopa rubatsiro muchikamu ichi havagone kumiswa.
Cookie chikamu "kushandiswa"
Cookies ari muchikamu che "" Usage "anouya kubva kune vanopa avo vanopa zvimwe zvinoshanda kana zvemukati, senge zvemagariro midhiya, vhidhiyo zvemukati, mafonti, nezvimwe. Vanopa muchikamu ichi vanokanganisa kana zvese zvinhu zviri papeji zvinoshanda nemazvo .
"Kuyera" cookie chikamu
Cookies kubva ku "Kuyera" chikamu anouya kubva kune vanopa vanogona kuongorora kupinda kune webhusaiti (asingazivikanwe, hongu). Izvi zvinopa muongororwo webhusaiti mashandiro uye maitirwo aro Kubva pane izvi, matanho anogona kutorwa, semuenzaniso, kunatsiridza saiti munguva refu.
"Mari" yekiki chikamu
Cookies kubva ku "Mari" chikamu chinouya kubva kune vanopa avo masevhisi avo anoshandisa mari yekushandisa uye chikamu chewebhu webhusaiti. Izvi zvinotsigira kuenderera kuri kuvapo kwewebhusaiti.
Server faira mafaera
Mupi wemapeji anozvitorera nekuchengeta ruzivo mune izvo zvinonzi mafaera erogu, izvo bhurawuza rako rinotumira kwatiri. Izvi ndeizvi:
Browser mhando uye browser vhezheni
operating system yakashandiswa
Zita reimba yekombuta yekuwana
Nguva yechikumbiro che server
Iyi data haizobatanidzwe nemamwe masosi edata.
Iyi data inounganidzwa pahwaro hweArt. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Iyo webhusaiti inoshanda ine kufarira kwepamutemo muhunyanzvi husina kukanganisa-kuratidzwa uye kugadziridzwa kwewebsite yake - mafaera erogi mafaera anofanirwa kunyorwa nekuda kweizvi.
Facebook plugins (senge & share bhatani)
Mapulagi eiyo pasocial network Facebook, mupi Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, akabatanidzwa pamapeji edu. Iwe unogona kuziva Facebook plugins neiyo Facebook logo kana iyo "Senge" bhatani pane webhusaiti yedu. Iwe unogona kuwana pfupiso yeiyo Facebook plugins pano: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Paunoshanyira webhusaiti yedu, kubatana kwakananga kunosimbiswa pakati pebrowser yako neye Facebook server kuburikidza ne plug-in. Facebook inogamuchira iyo ruzivo kuti iwe wakashanyira yedu saiti neako IP kero. Kana iwe ukabaya iyo Facebook "Senge" bhatani iwe paunenge watopinda muako Facebook account, unogona kubatanidza zvirimo zvemapeji edu kune yako Facebook mbiri. Izvi zvinogonesa Facebook kupa yako kushanya kuwebsite yedu kune yako mushandisi account. Tinoda kuratidza kuti, semupi wemapeji, isu hatina ruzivo rwezviri mukati meta data rakatumirwa kana kushandiswa kwaro neFacebook. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve izvi muFacebook's dziviriro yekudzivirira data pa: https://de-de.facebook.com/policy.php
Kana iwe usiri kuda kuti Facebook igone kugovera yako kushanya kune yedu webhusaiti kune yako Facebook mushandisi account, ndapota buda kunze kweako Facebook mushandisi account.
Mapeji edu anoshandisa Google+ mabasa. Mupiki ndiye Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Kuunganidzwa nekuparadzirwa kweruzivo: Unogona kushandisa bhatani reGoogle + kuburitsa ruzivo pasirese. Iwe nevamwe vashandisi munogamuchira zvemunhu zvemukati kubva kuGoogle uye vatinoshanda navo kuburikidza neGoogle + bhatani. Google inochengetedza zvese ruzivo rwamakapa +1 zvemukati uye ruzivo nezve peji rawakatarisa pawakadzvanya +1. Yako +1 inogona kuratidzwa seye zano pamwe chete neprofile zita rako uye pikicha yako mumasevhisi eGoogle, senge mukutsvaga kana muprofita yako yeGoogle, kana kune dzimwe nzvimbo kumawebsite uye kushambadza paInternet.
Google inorekodha ruzivo nezve ako +1 zviitiko kuitira kuti uvandudze Google services iwe nevamwe Kuti ukwanise kushandisa bhatani reGoogle +, unoda chimiro chinoonekwa pasi rose neGoogle paruzhinji chinofanira kunge chiine zita rakasarudzirwa chimiro. Iri zita rinoshandiswa mumasevhisi ese eGoogle. Mune zvimwe zviitiko, iri zita rinogona zvakare kutsiva rimwe zita rawakamboshandisa kana uchigovana zvemukati neakaundi yako yeGoogle. Kuzivikanwa kwenyaya yako yeGoogle kunogona kuratidzwa kune vashandisi vanoziva yako e-mail kero kana vane rumwe ruzivo rwunozivisa nezve iwe.
Kushandiswa kwemashoko akaunganidzwa: Pamusoro pezvinangwa zvataurwa pamusoro apa, ruzivo rwaunopa runozoshandiswa maererano nemitemo inochengetedzwa yedata reGoogle. Google inogona kushambadzira zvakapfupikiswa manhamba nezve zviitiko zve +1 zvevashandisi kana kuzvipfuudza kuvashandisi nevadikani, sevashambadziri, vashambadziri kana mawebhusaiti akabatana.
Kuongorora maturusi uye kushambadzira:
Iyi webhusaiti inoshandisa mashandiro ewebhu yekuongorora sevhisi Google Analytics. Mupiki ndiye Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics inoshandisa anonzi "makuki". Aya ndiwo mafaira emafaira akachengetedzwa pakombuta yako uye ayo anoita kuti ushandise webhusaiti yako kuongororwa. Ruzivo rwunogadzirwa nekuki pamusoro pekushandisa kwako ino webhusaiti inowanzoendeswa kune Google server muUSA uye inochengetwa imomo.
Iko kuchengetwa kweGoogle Analytics makuki kunoenderana neArt. 6 Para. 1 lit.f.f GDPR. Iyo webhusaiti inoshanda ine kufarira zviri pamutemo kuongorora maitiro evashandisi kuitira kuti igadzirise zvese zviri zviviri webhusaiti uye kushambadzira kwayo
Isu takaita kuti IP isazivikanwe basa pane ino webhusaiti. Nekuda kweizvozvo, kero yako yeIP ichapfupiswa neGoogle mukati mematunhu enhengo dzeEuropean Union kana mune dzimwe nyika dzinobvumirana dzeChibvumirano cheEuropean Economic Area isati yatumirwa kuUSA. Iyo yakazara IP kero inongopfuudzwa kune Google server muUSA uye kupfupikiswa imomo mune yakasarudzika kesi. Pachinzvimbo chemunhu anoita webhusaiti ino, Google inoshandisa ruzivo urwu kuongorora mashandisiro aunoita webhusaiti iyi, kuunganidza mishumo yezviitiko zvewebsite uye kupa mushandi webhusaiti mamwe masevhisi ane chekuita nebasa rewebhusaiti uye kushandiswa kweinternet. Iyo IP kero inotakurwa nebrowser yako sechikamu cheGoogle Analytics haizobatanidzwe nedzimwe data reGoogle.
Unogona kudzivirira kuchengetwa kwemakuki nekumisikidza yako browser software maererano; zvisinei, tinoda kuratidza kuti mune ino kesi unogona kusakwanisa kushandisa ese mashandiro ewebhusaiti iyi kuzere kwavo. Iwe unogona zvakare kudzivirira Google kubva kuunganidze iyo data inogadzirwa necokie uye zvine chekuita nekushandisa kwako webhusaiti (kusanganisira yako IP kero) uye kubva mukugadzirisa iyi data nekukopa browser ye plug-in inowanikwa pasi peinotevera link uye isa: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Kupokana kupokana kuunganidzwa kwedata
Unogona kudzivirira Google Analytics kubva kuunganidzira yako data nekudzvanya bhatani pazasi. Izvi zvinoratidza ruzivo uye nzira dzekumisikidza dzekushandisa makuki, nekudzvanya pa "" iwe unobvisa, pakati pezvimwe zvinhu, kuunganidzwa kwedata rako muakaundi yeGoogle Analytics:
Ratidza sarudzo dzekumisa Google Analytics
Unogona kuwana rumwe ruzivo rwekuti Google Analytics inobata sei mushandisi dhata muGoogle zvakavanzika mutemo: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Raira data kugadzirisa
Isu tapedzisa chibvumirano chekugadzirisa dhata chibvumirano neGoogle uye nekuzadzisa zvakazara zvinodiwa zvevakuru veGerman kuchengetedza data pavanoshandisa Google Analytics.
Hunhu hwevanhu muGoogle Analytics
Iyi webhusaiti inoshandisa "huwandu hwehunhu" basa reGoogle Analytics. Izvi zvinobvumira kuti mishumo igadzirwe ine ruzivo nezvezera, murume kana murume uye zvido zvevashanyi vesaiti. Iyi dhata inouya kubva kune inofarira-based kushambadza kubva kuGoogle uye data yevaenzi kubva kune wechitatu-bato vanopa. Iyi data haigone kupihwa kune mumwe munhu. Iwe unogona kudzima basa iri chero nguva kuburikidza neaset marongero muGoogle account yako kana kazhinji kurambidza kuunganidzwa kwedata rako neGoogle Analytics sezvakatsanangurwa muchikamu "Zvinoramba kuunganidzwa kwedata". Ino webhusaiti inoshandisa "demographic hunhu" basa reGoogle Analytics. Izvi zvinobvumira kuti mishumo igadzirwe ine ruzivo nezvezera, murume kana murume uye zvido zvevashanyi vesaiti. Iyi data inouya kubva kune inofarira-based kushambadzira kubva kuGoogle uye data yevashanyi kubva kune wechitatu-bato vanopa. Iyi data haigone kupihwa kune mumwe munhu. Unogona kudzima basa iri chero nguva uchishandisa marongero eshambadziro muakaundi yako yeGoogle kana kazhinji kurambidza kuunganidzwa kwedata rako neGoogle Analytics sezvakatsanangurwa muchikamu "Chinopesana nekutora data".
Iyi webhusaiti inoshandisa Google AdSense, sevhisi yekubatanidza kushambadza kubva kuGoogle Inc. ("Google"). Mupiki ndiye Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google AdSense inoshandisa zvinonzi "makuki", zvinyorwa zvemafaira zvakachengetwa pakombuta yako uye izvo zvinobvumidza kuongororwa kwekushandisa kwewebhusaiti. Google AdSense inoshandisawo anonzi web beacon (zvisingaonekwi mifananidzo). Aya ma beacon ewebhu anogona kushandiswa kuongorora ruzivo senge traffic yevashanyi pamapeji aya.
Ruzivo rwunogadzirwa nemakuki uye mawebhu mabheoni nezve kushandiswa kwewebsite ino (kusanganisira IP kero yako) uye kuendeswa kwemafomati ekushambadzira anotumirwa kune Google server muUSA uye inochengetwa imomo. Ruzivo urwu runogona kupfuudzwa neGoogle kune vanobvumirana neGoogle. Nekudaro, Google haizobatanidza yako IP kero neimwe data yakachengetwa nezvako.
Iko kuchengetwa kweAdSense makuki kunoenderana neArt. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Iyo webhusaiti inoshanda ine kufarira zviri pamutemo kuongorora maitiro evashandisi kuitira kuti igadzirise zvese zviri zviviri webhusaiti uye kushambadzira kwayo
Iwe unogona kudzivirira kuisirwa kukuki nekumisikidza yako browser software maererano; zvisinei, tinoda kuratidza kuti mune ino kesi unogona kusakwanisa kushandisa ese mashandiro ewebhusaiti iyi kuzere kwavo. Nekushandisa ino webhusaiti, unobvumidza kugadzirisa kwe data rakaunganidzwa nezvako neGoogle nenzira yakatsanangurwa pamusoro uye nechinangwa chakataurwa pamusoro.
Mapulagi uye zvishandiso:
Google Web Fonti
Iri peji rinoshandisa anonzi mafonti ewebhu, ayo anopiwa neGoogle, kune yunifomu yekuratidzira mafonti. Paunosheedza peji, bhurawuza rako rinotakura mafonti ewebhu anodikanwa mubrowser cache kuitira kuti uratidze magwaro nemafonti nenzira kwayo.
Nechinangwa ichi, bhurawuza rauri kushandisa rinofanirwa kubatana nemaseva eGoogle. Izvi zvinopa Google ruzivo rwekuti webhusaiti yedu yakawanikwa kuburikidza neako IP kero. Iko kushandiswa kweGoogle Web Fonti kuri mukufarira yunifomu uye inokwezva mharidzo yezvatinopa pamhepo. Izvi zvinomiririra kufarira kuri mukati mezvinoreva Art. 6 Para. 1 yakavhenekera GDPR.
Kana bhurawuza rako risingatsigire mafonti ewebhu, font yakajairwa inoshandiswa nekombuta yako.
Rumwe ruzivo nezve Google Web Fonti zvinogona kuwanikwa pa https://developers.google.com/fonts/faq uye mumutemo weGoogle zvakavanzika: